Email na Acid: Nnwale Email, Nchọpụta nsogbu na Omume Kasị Mma | Martech Zone
Email na Acid: Nnwale Email, Nchọpụta nsogbu na Omume Kasị Mma
Wenezdee, Machị 23, 2016 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Enwere ihe kpatara ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme atụmatụ itinyekwu oge na ego na ịre ahịa email na 2016: ịre ahịa email na-aga n'ihu na-ejide ROI kachasị elu nke ọwa ahịa ọ bụla dijitalụ.
Ndị ahịa ọ bụla nwere ọkacha mmasị ha na-eweta ọrụ email na nyocha nyocha email. Mana ọtụtụ mgbe, ha na-eleghara ihe dị mkpa nke mkpọsa ahụ anya: na-anwale email ha n'ofe ọtụtụ ngwaọrụ na ndị ahịa tupu ha edebe mkpọsa ahụ. Agbanyeghị na ọtụtụ mkpọsa ule na izipu ozi na igbe iPhone ma ọ bụ Gmail, nke ahụ ezughị. N'ihi gịnị? N'ihi na ndị ahịa email ọ bụla sụgharịrị koodu n'ụzọ dị iche.
Email na Acid Isi
Email na Acid na-enye nnwale email, nchọpụta nsogbu na elu nchịkọta ngwaọrụ iji nyere ụlọ ọrụ aka dị mfe ma melite mbọ azụmaahịa email ha. Companylọ ọrụ ahụ na-anwale mkpọsa email na 45 dị iche iche na ndị ahịa email na ngwaọrụ ma na-enye ngwaọrụ iji dozie nsogbu nsụgharị. Tọrọ ntọala na 2009, Email na Acid enyerela karịa ụlọ ọrụ 80,000 n'ụwa niile nwalee ozi ịntanetị ha.
Ndị na-ere ahịa na-eji Email na Acid mee ka ozi ịntanetị dị nfe dị mfe site na ncha na n'ime ndị na-eweta ọrụ email ọ bụla. Mana nke ahụ abụghị ihe niile - Email na Acid na-enye ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ, gụnyere:
Njikọ na nkwado ihe oyiyi
Nyocha koodu na HTML kachasị
Nlele ihu weebụ na ọtụtụ ndị ahịa weebụ na ekwentị mkpanaaka
Na mgbakwunye na ngwa ọrụ ya, Email na Acid na-enye ọtụtụ akụrụngwa yana nkwado ndị ahịa na-enweghị atụ. Ọgbakọ nke ndị mejupụtara ndị na-ere ahịa email, ndị na-edepụta akwụkwọ na ndị nrụpụta dị maka onye ọ bụla, n'efu. Email na Acid Resource Center na-akwado ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ nke nnabata n'efu na ndebanye aha email ngwakọ, ntuziaka, akwụkwọ akụkọ na ndị ọzọ.
Mkpa Ule Email
Ndị ahịa Email na ngwaọrụ mkpanaka gosipụtara HTML dị iche iche n'ihi na onye ahịa ọ bụla sụgharịrị HTML n'ụzọ ọ bụla. Ọ bụ ya mere enwere ike ịhapụ koodu gị ziri ezi na Outlook mana ọ mara mma na onye ahịa Gmail gị.
Ọ bụrụ na ịnwaleghị ka ị chọpụta nsogbu nzuzo na nsogbu gị tupu ị gbasaa mkpọsa gị, itinye aka na email gị (yana akara na ROI) nwere ike bụrụ nke adịghị mma. N'ezie, pasent 70 nke ndị mmadụ na-ekwu na ha ga-ehichapụ ozi email ozugbo ma ọ bụrụ na ọ rụghị nke ọma na igbe mbata ha.
Omume Kachasị Mma Email
Ọ bụrụ na ị bụ ụwa ọhụrụ nke ozi ịntanetị, ị nwere ike ịchọta ozi a niile dị oke egwu. Usoro ihe omimi nke oge a enweghi nkwado na ndi ahia email ma ugbua ndi mmadu n’agwa gi ka iwere tebụl. Nke a bụ ihe ahụ, tebụl dị na koodu email bụ ihe dị mkpa, yabụ mee atụmatụ ịbụ ọkachamara na ha. Ihe omuma ole na ole:
Single kọlụm imewe na-eme ka ndụ dị mfe! O zuru ezu maka ọtụtụ ozi ịntanetị (akwụkwọ akụkọ abụghị naanị) ma mee ka ọ dịrị ya mfe ịnabata ngwaọrụ mkpanaaka.
Jiri 600px maka obosara dabara nke ọma na ọtụtụ web na desktọọpụ ahịa. Enwere ike ịhalata ogo ahụ ka ọ dabara na ntanetị na-eji nyocha mgbasa ozi ma ọ bụ usoro ngwakọ mmiri (gụọ maka nke ahụ).
Mgbe enwere obi abụọ, tebụl. Echefula divs na floats. Tebụl bụ ụzọ kachasị ntụkwasị obi iji nweta nhazi nhazi. Usoro a bụ ihe ndabere nke ime ihe na mmiri mmiri ma nye gị ohere iji uru kwekọrọ na nhazi gị.
Buru ndị ọrụ ekwentị n'uche. Fọdụ ndị na-ese ihe agbanweela “mbido ekwentị”. Approachzọ a na-aga nke ọma maka ozi ịntanetị dị mfe dịka ntugharị okwuntughe, ozi ịntanetị azụmahịa, na mmelite akaụntụ.
Na Email na Acid ka weputara n'efu, nchịkọta akụkọ email dabere na weebụ. Onye ndezi a na-enye ndị ọrụ ohere iwu, dezie, nyocha ma bulite ozi ịntanetị n'otu ngwa na oge.
Nwale, Ule, Nwale!
Email nzuzo nwere ike ịbụ aghụghọ. Nanị ụzọ iji jide n'aka na email gị ga-adị oke mma ebe niile bụ ịnwale ya. Email na Acid nwere ike inye aka na nke ahụ site na ịmepụta nseta ihuenyo nke email gị na ndị ahịa na email kachasị ewu ewu na ihe na-erughị 30 sekọnd.
Na mgbakwunye na ọrụ nnwale email, Email na Acid na-enye ndụmọdụ nchọpụta nsogbu na ozi maka nsogbu ọ bụla ị zutere, nyocha ntinye ntinye ntinye na ntinye akwụkwọ na email. nchịkọta. Companylọ ọrụ ahụ na-edekwa blog dị ịrịba ama na-ekpuchi isiokwu ndị dị ka Nchọpụta nsogbu Nweta Ogologo na HTML Email or Best Email Development aghụghọ na Hacks.
Na plethora nke ndi ahia email na igwe di, nnwale email abughi ihe kwesiri; ọ bụ ihe dị mkpa. Were mgbalị email gị n'ọkwa ọzọ:
Banye maka Ubochi Ubo nke Ubo nke Email na Acid!
Tags: emailonye na-ewu emailemail imeweemail mmepeemail nchịkọta akụkọemail na acidozi nsụgharịnyocha emailn'obosara emailemail mkpanakanchịkọta akụkọ ntanetị na ntanetị
Kedu teknụzụ ndị C-Level Marketers na-etinye na?
Atụmatụ dị mma! Na-ada ka nnukwu ngwa ọrụ, agbanyeghị na m na-eji GetResponse. Ọ dị ezigbo mkpa ịme ule A / B nke mkpọsa email. Ihe dị mma nwere ike ọ gaghị abụ uche ndị ọzọ.